Laftagareen oo ka hadlay khilaafka Farmaajo & Rooble - Bulsho News
Baydhabo (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed laftagareen ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka u dhaxeeyo Ra’isulwasaare Xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Laftagareen oo ugu horeyn ka hadlay dhex-dhexaadintii ay ka dhex wadeyn Ra’isulwasaaraha iyo madaxweynaha, wuxuuna sheegay inay weli ku rajo weyn yihiin in wax kasta lagu dhameeyo wada-hadal iyo isfaham.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xusay in khilaafka u dhaxeeyo labada mas’uul ee dalka ugu sarreeyo uu dib u dhac u keeni karo dalka iyo doorashadii la filayey inay Soomaaliya ka dhacdo.
Wuxuu sheegay in si looga hortago inuu dalka galo xaalad hubanti la’aan ah ay sii wadi doonaan dhex-dhexaadintii ay ka dhex wadeyn madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha.
Hadalka Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli uu xoogeystay khilaafka u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, isla markaana ay soo saareen qoraalo iska soo horjeeda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa qoraal u Shalay soo saaray ku sheegay inuu awood dhimis ku sameeyey Ra’isuwlasaare Maxamed Xussen Rooble oo uu horey ugu wareejiyey qabashada doorashada iyo qorsheynta amniga.
Halka Ra’isulwasaare Rooble uu qoraalkaas ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka dalka isla markaasna uusan u hoggaansami doonin.
The Man Who Sold His Skin review –...
Fiona Hill, a nobody to Trump and Putin,...
‘Pandora papers’ show London is a key hub...
Bal qiyaas sidee ayay dunida noqon lahayd haddii...
Ole Gunnar Solskjaer Oo Sharaxay Sababta Uu Kaydka...